Golaha Wakiillada Puntland oo maanta doortay Guddigooda Joogta ah – Kalfadhi
Golaha Wakiillada Puntland oo maanta doortay Guddigooda Joogta ah
Golaha Wakiillada Puntland ayaa, kadib doorashadoodii Hogaanka Golaha iyo kii Madaxtinimada Puntland, waxay maanta isugu yimaadeen kulankoodii ugu horeeyey, oo ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Garoowe. Waxay isla maantaba dhiseen Guddigooda Joogta ah, oo ka kooban todobo xubnood.
Ka hor inta aysan dhisin guddigaas, oo ay u codeeyeen dhammaan Xildhibaannada joogtay kulankii Golaha ee maanta, waxa uu Guddoonka Goluhu u qeybiyey Xildhibaannada hab-raaca iyo shuruucda looga baahan yahay qofka u tartamaya ka mid noqoshada guddigaas oo ah kan qabanaya, golahana horkeenaya ajandyaasha Baarlamaanka Puntland.
Sagaal gobol, oo ah kuwa ay Puntland dhexdeeda ka sameysatay, ayaa lagu saleeyey qeybsiga Xubnaha Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland. Codeynta kadib ayuu Guddoomiyaha Golaha Wakillada, Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), ku dhawaaqay inuu guddigu ansax yahay. Xildhibaannada ka mid noqday Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland waxaa ka mid ah:
1) Axmed Jaamac Cabdulle
2) Cawil Xasan Daad
3) Muuse Saciid Xasan
4) Cabdicasiis Saciid Maxamed
5) Cali Axmed Saalax
6) Cabdiraxmaan Diiriye Carab
7) Nimco Cabdi Caarshe
Xildhibaano xiriir u jarista Golaha Shacabka ee Aqalka Sare ku tilmaamay sharci darro